Chloramphenicol Kwayedza fluorescence - BALLYA
Chloramphenicol Bvunzo Fluorescence
Comming sooon! Wakawanda bvunzo 20ppt
ZveMukaka, Mukaka Upfu, Pasteurized Mukaka
Mapepa: 96T / bhokisi
Nguva Yekuyedza: 7-10 mins
Mutemo: CN / EU / RU / US
Kurairwa KweChloramphenicol Bvunzo Fluorescence
Yega Test Kit, inokurumidza kuona inorwisa mabhakitiriya mumukaka uye chigadzirwa chemukaka uchishandisa fluorescent immunochromatography tekinoroji. Pangosvika 7-10 maminetsi kuti zvabuda.
Kune mukaka wakatsvuka, mukaka wakazara hupfu, mukaka wakasarudzika.
Kwete kuyambuka-kuita nema macrolides, trimethoprim, sulfonamides zvinodhaka, nezvimwe.
2. Mugumo wekutsvaga
Kuchengetedza & Shelf-Hupenyu
Pa 2 ~ 8 ℃ kunze kwezuva, mwedzi gumi nemiviri
Compolents (96T / bhokisi)
mazai chenguva duku
Mini Pipette (200μL)
Matipi e mini pipette
1. Tora 200 μL mukaka specimen, wedzera mune micro tsime, sanganisa ne pink mumiririri kagumi.
Dzokorora: dzivisa zvienzanisiro zvakasara zvakanyanya mutsime.
2. Gadzirira maminitsi matatu
3. Isa mitsetse mumatsime
4. Gadzirira maminitsi matatu
5. Tora micheka uye uverenge mhedzisiro neziso kana kuverenga.
1. Kana C mutsetse uchioneka, dudzira maererano nemirairo. T mutsara unofananidzwa neC mutsara kududzira zvakanaka kana zvisina kunaka.
2. Kana C & T isingaonekwe, hazvionekwi kuona, dzokorora kuyedzazve.
Kana uchida kuziva zvakawanda, tapota taura nesu
Trivia mibvunzo: Chii chinonzi chloramphenicol?
Chloramphenicol mishonga inorwisa mabhakitiriya
Chloramphenicol mishonga inorwisa mabhakitiriya inogona kushanda pane 50S subunit yebhakitiriya ribonucleoproteins uye inotadzisa iyo synthesis yemapuroteni.
Chloramphenicol antibiotics inosanganisira chloramphenicol, sulfomycin, uye isina kunhuwa chloramphenicol.
Sulfomycin: Ichi chigadzirwa is methylsulfone yakabva kune chloramphenicol. Iyo inogadzirwa yakafara-spectrum inorwisa mabhakitiriya mushonga. Yayo antibacterial spectrum uye inorwisa mabhakitiriya mhedzisiro yakafanana nekloramphenicol. Inonyanya kupararira mumabhakitiriya maseru uye inodzosera kumashure kune makumi mashanu emabhakitiriya ribosomes Pane iyo subunit, kukura kwepetide cheni kwakadzivirirwa (pamwe kuchidzivirira kushanda kweTransptididase), kuumbwa kweketeni repepide kwakadziviswa, uye synthesis yeiyo protein inodzivirirwa, nekudaro ichitamba antibacterial mhedzisiro.
Isina kunhuwa chloramphenicol: Chloramphenicol palmitate haina kuravira kunorwadza uye inokodzera kuti vana vatore nemuromo. Chloramphenicol inowora zvishoma nezvishoma mumatumbu mushure mekutora, saka ine mhedzisiro inogara kwenguva refu. Iine kushandiswa kumwechete sekloramphenicol uye ndeyekushandisa chete.
Mhando dzakasiyana dzehutachiona dzinogona kukudziridza kuramba chloramphenicol. Pakati pavo, E. coli, Shigella, uye Proteus zvakajairika, uye typhoid neStaphylococcus hazviwanzo. Hutachiona kupokana nekloramphenicol inononoka. Inogona kukonzerwa nekuchinja zvishoma nezvishoma kwekloramphenicol resistance gene, asi inogona kuparara zvoga.
Sei chloramphenicol inouraya mabhakitiriya?
Chloramphenicol inodzosera kumashure kune iyo 50S subunit, ichivharira mhedzisiro ye transpeptidylase, uye ichikanganisa kusunga kweaminoacyl-tRNA terminal pamwe ne50S subunit, nokudaro ichivharira kuumbwa kwecha itsva peptide maketani uye inhibiting protein synthesis. Nekuti chloramphenicol inogona zvakare kusanganiswa neyevanhu mitochondria 70S, inogona zvakare kudzvinyirira yemunhu mitochondrial protein synthesis uye inokonzeresa huturu kumuviri wemunhu. Nekuti kusungwa kwechloramphenicol kusvika 70S ribosomes inodzoserwa, inoonekwa seye bacteriostatic antibiotic, asi inogona zvakare kuve nehutachiona hwehutachiona pane mamwe mabhakitiriya ari pamushonga wepamusoro wezvinodhaka, kunyangwe pakadzika kwakadzika kwefuruwenza bacilli. Gadzira bactericidal mhedzisiro.
Chloramphenicol madonhwe eziso
Chloramphenicol madonhwe eziso anoratidzwa pakurapa kwehutachiona hwemaziso senge trachoma, trachoma, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus uye mamwe mabhakitiriya asinganzwisisike. Conjunctivitis, keratitis, blepharitis, nezvimwe.
Chloramphenicol nzeve inodonha
Chloramphenicol nzeve madonhwe anoshandiswa pakurapa kwekunze otitis, yakaoma uye isingaperi otitis media inokonzerwa nehutachiona hwehutachiona.
1. Typhoid nezvimwe Salmonella hutachiona: mushonga wesarudzo yetyphoid uye paratyphoid inokonzerwa nematambudziko akasimba, gastroenteritis inotapukirwa neSalmonella kazhinji haina kukodzera chigadzirwa ichi. Kana chirwere ichi chakanyanya, chinogona kunge chichiri kushandiswa kana ikabatanidzwa septicemia inogoneka; Muvanhu vakuru vane typhoid uye paratyphoid hutachiona, fluoroquinolones ndiyo yekutanga sarudzo (isina kukodzera vakadzi vane pamuviri nevana).
2. Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa seimwe yemishonga yesarudzo.
3. Kuputira kwehuropi, kunyanya otogenic, kazhinji hutachiona hwakasanganiswa hwemabhakitiriya eerobic uye anaerobic.
4. Zvirwere zvakakura zveanaerobic, senge izvo zvinokonzerwa ne Bacteroides fragilis, inonyanya kukodzera kune avo vane maronda anosanganisira epakati tsinga system. Anogona kushandiswa akabatana pamwe aminoglycoside mishonga yekurapa hutachiona hwemuviri uye hutachiona hutachiona kudzora kusangana kweaerobic uye anaerobic hutachiona hutachiona.
5. Hakuna imwe yakaderera-chepfu inorwisa mabhakitiriya mishonga inogona kushandiswa kurapa dzakasiyana dzakakomba hutachiona hunokonzerwa nehutachiona husingaite, senge sepsis uye hutachiona hutachiona hunokonzerwa neHaemophilus influenzae, Salmonella uye mamwe maGiribhi asina gramu, kazhinji ane aminoglycosides. Yakabatanidzwa.
6. Rickettsia hutachiona hunogona kushandiswa pakurapa Q fever, Rocky Mountain yakaonekwa fever, uye endemic typhus.
Inoshandiswa kurapa conjunctivitis, keratitis, blepharitis, trachoma, nezvimwe zvinokonzerwa neE.
US Brand Zita
Canadian Brand Zita
5. Isopto Fenicol
6. Minimini Chloramphenicol 05
8. Pentamycetin Ophthalmic Solution 025
9. Pentamycetin Ophthalmic Solution 05
Kunyangwe iko kushandiswa kwechloramphenicol mune zvekurapa zvemhuka zvakatemerwa zvakanyanya, chloramphenicol ine zvimwe zvakakosha zvekushandisa zvipfuyo. Kurima mombe ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvinoshandiswa. Dambudziko rekloramphenicol zvisaririra mumukaka riri kuwedzera kukura. Iyo chloramphenicol kukurumidza bvunzo kit yakazvimiririra yakagadzirirwa ne Ballya inogona kugadzirisa zvinetswa matambudziko. Mhedzisiro yekuyedza inoenderana nematanho eEU, kwete chete mashandiro ari nyore, asi zvakare ipfupi nguva uye kukwirira kwakanyanya. Ballya ichaita zvakadzama tsvakiridzo munzvimbo ino mune ramangwana.
Sulfonamides Bvunzo Kit
Maantigen nemaantibodies (8)
Msika weAsia (3)
BHORYA Nhau (4)
Katsi Zvirwere (1)
Zvirwere Zvemombe (62)
Kurima Dairy (48)
Dairy Chigadzirwa (1)
Kurima Kwekurima (15)
Lab Yezvokushandisa (6)
Mukaka Upfu (91)
Milking Midziyo (3)
Muedzo weKiti (7)
Pipette tip fekitori michina
Ungatanga Sei Kugadzira Covid 19 Bvunzo Kit?
Unogona here kushandisa terramycin pavanhu?
Iko kushandiswa kwetetracycline yehove
Chii chinonzi tetracycline mafuta ekuzora anoshandiswa?
Meno e tetracycline anokonzerwa sei?
Chii chinonzi tetracycline?
Ndeapi akajairwa doxycycline mhedzisiro?
Chii chinonzi aureomycin chinoshandiswa kurapa?
Ceftiofur ndeye cephalosporin here?
Ndeapi mazera akasiyana ecephalosporins?
Chii chinonzi Cefdinir chinoshandiswa kurapa?
Cephalexin mushonga unorwisa mabhakitiriya here?
Chii chinonzi cephalosporins antibiotics anoshandiswa?
Chii chinonzi penicillin V inoshandiswa?
Chii chinonzi penicillin g?
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yepiperacillin?
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yeNafcillin?
Ndeapi mabhakitiriya anouraya ampicillin?
Ndeupi musiyano uripo pakati pe amoxicillin nepenicillin?
Chii chinogona kuitwa naAmoxicilina kwauri?
Kuedza Sei Covid 19 Pamba?
Ndeipi beta lactam antibiotics mienzaniso?
Chii chinonzi clavulanic acid inoshandiswa?
SARS-CoV-2 Antigen Saliva Bvunzo
Chii chinonzi chloramphenicol chizoro chinoshandiswa?
Ko chloramphenicol nzeve inodonha yakanaka kune nzeve hutachiona here?
Methyl-sulfonyl analog ye chloramphenicol: Thiamphenicol
Chii chinonzi florfenicol chinoshandiswa?
Chii chinonzi lincomycin?
Ndezvipi zvinowanzoitika mhedzisiro yeclindamicina?
Vancomycin mushonga unorwisa mabhakitiriya here?
Chii chinonzi polypeptide?
Nderupi rudzi rwemishonga inorwisa mabhakitiriya inonzi polymyxin B?
Veterinary Mishonga inorwisa mabhakitiriya-Tilmicosin
Tylosin yakachengeteka kune imbwa here?
Spiramycine ndeye macrolide here?
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yecacithromycin 500 mg?
Chii chinonzi mafuta erythromycin ophthalmic anoshandiswa?
Pfupi Sumo kune Erythrocin
Ndeapi maantibayoti ari macrolides?
Azithromycin yeuti inoshanda here?
Chii chinofanira kuve iyo azithromycin dosage?
Chii chinonzi spectinomycin chinoshandiswa kurapa?
Chii chinonzi neomycin chinoshandiswa?
Chii chinonzi gentamicin chinoshandiswa kurapa?
Chii chinonzi gentamicin sulfate inoshandiswa?
Chii chinonzi streptomycin chinoshandiswa?
Wepamusoro makumi maviri emadhizaicicant muChina
Wepamusoro gumi Ultra-yakadzika tembiricha inotonhora muChina